"PR200554en 25/03/2020 CO - Page 33 of 61 - TheMummichogBlog - Malta In Italiano
Министерот Хозе Херера потврди дека Министерството, заедно со Министерството за локална самоуправа, се одржува континуирано дискусии и тесно соработува со локалните совети и асоцијација на локалните совети. Воведувањето на дигиталната платформа е една од серијата мерки и активности кои се спроведуваат со цел да се заштити здравјето на работниците, советниците и на пошироката јавност.
Министерството би сакал да ја покаже својата благодарност до Здружението на локалните совети, градоначалници, советници, извршен секретари и нивната асоцијација, како и сите вработени за нивната соработка и континуирана работа, тие се вршат за доброто на Малтешкиот и Gozitan заедници.
-Gazety BY NY FANOMPOANA HO AN’NY harem-pirenena, NY FITONDRANA EO AN-TOERANA SY ZAVAKANTO
Taorian’ny asa mirindra amin’ny Sampan-draharahan’ny governemanta eo an-toerana ao amin’ny Ministeran’ny noho ny harem-pirenena, ny Zavakanto sy eo an-toerana sy MITA Governemanta, ny sehatra nomerika no nampidirina, ary dia toy izany no toy ny amin’izao andro izao, ny governemanta eo an-toerana fivoriana azo atao amin’ny aterineto. Amin’ny alalan’ny sehatra io, ny fitondram-panjakana eo an-toerana dia ho afaka hanao ny fivoriana tsy misy ny ilaina ny fifandraisana mivantana eo mpanolotsaina.
Minisitry José Herrera nilazàny fa ny asa fanompoana, miaraka amin’ny departemantan’i ho an’ny Governemanta an-toerana, dia mihazona mitohy adihevitra ary miara-miasa akaiky amin’ny filankevitra ny eo an-toerana sy ny Filankevitra eo an-toerana ‘Association. Ny fampidirana ny sehatra nomerika dia iray amin’ireo andiana fepetra sy ny zavatra izay ho ampiharina mba hiarovana ny fahasalaman’ny mpiasa, mpanolotsaina sy ny vahoaka amin’ny ankapobeny.
Ny asa fanompoana dia te-haneho ny fankasitrahana ho an’ny eo an-toerana Kônsily ‘Association, ben’ny tanàna, mpanolotsaina, ny mpanatanteraka sekretera sy ny fikambanana, ary koa ny mpiasa ny fiaraha-miasa sy ny tapaka asa izy ireo mitondra avy ho tombontsoan’ ny Malta sy Gozitan fiaraha-monina.